भिटामिन ‘ए’ को कमी भए के हुन्छ?-भिटामिन ‘ए’ कसरी पाइन्छ? -
April 22, 2019 khabarsansaarLeaveaComment on भिटामिन ‘ए’ को कमी भए के हुन्छ?-भिटामिन ‘ए’ कसरी पाइन्छ?
Vitamin A Deficiency Result
शारीरिक विकास र स्वास्थ्यका लागि आवश्यक पर्ने तत्व नै भिटामिन हो। शरीरलाई स्वास्थ राख्न र रोगबाट बचाउन भिटामिन अनिवार्य नै हुन्छ। भिटामिन मुख्यतयाः पानीमा घुल्ने र चिल्लो पदार्थमा घुल्ने प्रकृतिका हुन्छन्। भिटामिन ‘बी’ तथा ‘सी’ पानीमा घुल्ने र भिटामिन ‘ए’, ‘डी’, ‘ई’, र ‘के’ चिल्लो पदार्थमा घुल्ने हुन्छन्।
भिटामिन ‘ए’ भएका तत्वहरु समग्र रुपमा स्वास्थ रहन र दीर्घरोग विरुद्ध उत्कृष्ट मानिन्छन्। दैनिक आहारमा भिटामिन ‘ए’ को उपयोगले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ। त्यस्तै राति नदेख्ने रतन्धो रोगबाट जोगाउँछ। आँखा तेजिलो बनाउँछ। यति मात्र होइन, भिटामिन ‘ए’ ले छाला, श्वासप्रश्वास तथा प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी रोग लाग्न दिँदैन।
छाला सुख्खा हुनु र छालामा पटकपटक संक्रमण हुनु।
आँखा सुख्खा हुनु।
राति आँखा देख्न गाह्रो हुनु।
बालबालिकाको ढिलो विकास हुनु।
पटकपटक छाति तथा घाँटीको संक्रमण हुनु।
घाउ ढिलो निको हुनु।
भिटामिन ‘ए’ कसरी पाइन्छ?
यी औषधिहरु विगत २५ वर्षदेखि वितरण गरिंदै आएको छ। यस पटक पनि २०७६ वैशाख ६ र ७ गते देशैभर महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र स्वास्थ्यकर्मीबाट वितरण गरिंदै छ।
आफ्ना बच्चालाई नजिकैको भिटामिन ‘ए’ वितरण केन्द्र वा स्वास्थ्य संस्थामा लगेर भिटामिन ‘ए’ खुवाई यसको कमीवाट हुने असरबाट बचाऔं र बाल मृत्युदर घटाऔं।
Tagged Vitamin A Deficiency Result भिटामिन ‘ए’ को कमी भए के हुन्छ?
दाँत स्वस्थ र सफा राख्न अपनाउनुहोस् यी तरिका
June 5, 2019 khabar sansaar
डेंगुका ७ लक्षण र बच्ने ८ उपाय
September 9, 2019 September 8, 2019 khabar sansaar
बच्चाको उमेर अनुसारको उचाइ तथा तौल कति हुनुपर्छ ?
May 2, 2019 khabarsansaar